तिजको मुखैमा सोच्नै नसकिने गरी आकाशियो सुनको भाउ, एक तोलाको मुल्य नै…. – Fewa Times
तिजको मुखैमा सोच्नै नसकिने गरी आकाशियो सुनको भाउ, एक तोलाको मुल्य नै….
प्रकाशित मिति: August 25, 2019 1:29 pm
काठमाडौं – आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ पुनः सोच्नै नसकिने गरि महङ्गीएको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार एकैदिन १२ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तैगरी आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला ७२ हजार २ सय तथा चाँदी ८५० रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।चाँदीको भाउ हालसम्मकै उच्च हो। शुक्रबार प्रतितोला तेजावी सुन ७१ हजार तथा चाँदी ८३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
विश्व बजारमा सुनको भाउ बढेको र डलरको भाउ पनि उच्च रहकाले नेपालमा पनि सुनको भाउ बढेको हो । आज अमेरिकी डलरको भाउ १ सय १४ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ।